भारतमा ३३ हजार ६२ जनामा संक्रमण, १ हजार ७९को मृत्यु, विश्वको अवस्था के छ? – Health Post Nepal
भारतमा ३३ हजार ६२ जनामा संक्रमण, १ हजार ७९को मृत्यु, विश्वको अवस्था के छ?
२०७७ वैशाख १८ गते १२:४७
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट १ हजार ७९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ हजार भन्दा बढीमा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
बितेको २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट भारतमा ६६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। र, १ हजार ७ सय १८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
यो संगै भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ३३ हजार ६२ पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुमध्ये ८ हजार ३ सय २५ जना उपचारपछि निको भएका छन्। भारतको महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण छ। महाराष्ट्रमा भाइरसको संक्रमणबाट ४ सय ३२ जानको ज्यान गइसकेको छ। यहाँ ११ हजार ९ सय ४० जनामा भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ, तिमध्ये ९ हजार ९ सय १५ जनाको उपचार भइरहेको छ भने १ हजार ५ कय ९३ जना निएका छन्।
राजधानी दिल्लीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ५ सय ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये १ हजार ९२ जना निको भइसकेका छन्।
त्यस्तै तमिलनाडुमा कोरोना भाइरसको कारण २७ जनाको मृत्यु भएको छ। जम्मा संक्रमित ३ हजार ३ सय ९९ जनामध्ये २ हजार १ सय ६२ जनाको उपचार भइरहेको छ भने, १ हजार २ सय १० जना निको भएका छन्।
मध्यप्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १ सय २९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३ हजार १ सय १५ जना संक्रमितमध्ये ४ सय ६१ जना निको भएका छन्।
बिहारमा ४ सय ५९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ भने २ जनाको मृत्युु भएको छ। संक्रमितमध्ये ६५ जना निको भएका छन्।
उत्तरप्रदेशमा हालसम्म २ हजार ६ सय ८३ जनामा भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ सय १० जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्।
विश्वको अवस्था के छ?
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २ लाख २८ हजार २ सय ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ लाख २१ हजार २९ भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
संक्रमितमध्ये १० लाख ५ सय ७९ जना उपचारपछि निको भएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका भएको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या अमेरिकामा बढी छ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म १० लाख ६४ हजार ५ सय ७२ जननामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ भने ६१ हजार ६ सय ६९ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै,स्पेनमा २ लाख ३६ हजार ८ सय ९९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको २४ हजार २ सय ७५ जनाको ज्यान गएको छ। इटालीमा २ लाख ३ हजार ५ सय ५१ जना संक्रमितमध्ये २७ हजार ६ सय ८२ जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा रहेका १लाख ६६हजार ४ सय २० जना कोरोना भाइरसका संक्रमितमध्ये २४ हजार ८७ जनको मृत्यु भइसकेको छ भने बेलायतमा रहेका १ लाख ६५ हजार २ सय २१ जना संक्रमितमध्ये २६ हजार ९७ जनाको ज्यान गएको छ।
त्यस्तै, जमर्नीका १ लाख ६१ हजार ५सय ३९ जना संक्रमितमध्ये ६ हजार ४ सय ६७, टर्कीका १ लाख १७ हजार ५ सय ८९ जनामध्ये ३ हजार ८१, रसियामा रहेका ९९ हजार ३ सय ९९ जनामधये ९ सय ७२,इरानमा रहेका ९३ हजार ६ सय ५७ जनामध्ये ५ हजार ९ सय ५७ र ब्राजिलमा रहेका ७९ हजार ६ सय ८५ जनामध्ये ५ हजार ५ सय १३ जनाको मृत्यु भएको छ।
नेपालमा हालसम्म ५७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १६ जना उपचारपछि निको भएका छन्।